Blog - Uyicoca njani iIyelashes zobuxoki? Indlela yokuQala!
I-Faux Mink Eyelashes
Iphakheji kunye nabaququzeleli
Ungayicoca njani iIyelashes zobuxoki? Indlela yokuQala!
Soloko ugcina imivimbo yakho ye-faux icocekile kwaye ugcine elona xesha lide!
Kutheni le nto kufuneka sicoce ii-Eyelashes zethu zobuxoki?
I-eyelashes yobuxoki ngamanye amaxesha inokuba nexabiso elininzi, kungoko unokufuna ukukwazi ukuyisebenzisa ngaphezulu kwesinye. Ngokubhekisele kwii-Eyelashes zethu zobuxoki zeFelvik, zihlala zikwazi ukusebenzisa ukuya kuthi ga kumaxesha angama-20-25 ukuba ziphathwe ngendlela efanelekileyo. Ukuba ufuna ukusebenzisa imivumbo yakho kwakhona, uneendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Unokucoca imivimbo nge-swab yomqhaphu okanye i-Q-tip. Unokusebenzisa ii-tweezers kunye nesikhongozeli seplastiki esigcwaliswe ngesicoci sokucoca ukucoca kancinci imivimbo. Xa ugqibile, gcina imivimbo yamanga ngokukhuselekileyo kwindawo epholileyo neyomileyo okanye isikhongozeli.
Ungayicoca njani i-eyelashes yobuxoki?
Inyathelo 1: Lungisa izixhobo zakho
Ngaphambi kokuba uqale ukucoca i-eyelashes yakho engeyiyo, hlanganisa izixhobo zokwenza njalo. Ukuze uyenze ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo, uya kudinga ezi zinto zilandelayo:
Ukususa i-Makeup, eyilelwe ngokukodwa ukususa izithambiso zamehlo
Umqhaphu uswazi / Q-incam
Sebenzisa Isikhongozelo sePlastiki
Inyathelo 2: Hlamba izandla
Ukuqala, hlamba izandla zakho emanzini acocekileyo etephu kunye nesepha yokulwa neentsholongwane. Kubaluleke kakhulu ukunamathela kweli nyathelo kwaye sigcine izandla zicocekile. Awufuni ukuphatha iinkophe zobuxoki ngezandla ezimdaka, kuba oku kunokubangela ukosuleleka kwamehlo kwaye kunokuba kubi kakhulu.
Yenza izandla zakho zimanzi ngamanzi acocekileyo, abalekayo. Hlanganisa izandla zakho kwisepha yokulwa neentsholongwane malunga nemizuzwana engama-20. Qiniseka ukuba ujolise kwiindawo ezinje phakathi kweminwe, umqolo wezandla zakho, nangaphantsi kweenzipho.
Hlamba izandla zakho emanzini acocekileyo emva koko wome ngetawuli ecocekileyo.
Inyathelo 3: Susa imivumbo yakho engeyiyo.
Faka isicelo sokususa i-makeup phezu kwe-eyelash ukususa iglue. Cinezela ezantsi kwisiciko sakho ngomnwe omnye kwaye uphakamise ngobunono i-eyelash kunye nenye. Sebenzisa iipads zeminwe yakho okanye i-tweezers ngaphezulu kweenzipho zakho.
Qiniseka ukuba ubambe iinkophe ngesithupha sakho kunye nasesandleni sakho.
Chuba ibhendi ngaphakathi kancinci. Imivimbo kufuneka ivele ngokulula.
Sukusebenzisa ioyile esekwe kwioyile xa unxibe iinkophe zobuxoki.
Inyathelo 4: Cwina ibhola yomqhaphu ekususeni i-makeup (okanye iFelvik Eyelash Remover) kwaye uyijike ecaleni kwemivumbo engeyonyani.
Thatha ibhola yomqhaphu. Yithambise kwisithambisi esithile sokwenza izinto okanye kwiFelvik Eyelash Remover. Hambisa i-swab ecaleni kwemivumbo engeyonyani ngokuhamba kancinci. Sebenzisa i-swab ukusuka kwincam yemivumbo ukuya esiphelweni semivimbo, uqiniseke ukuba ufumana umtya wokuncamathela. Qhubeka ude yonke into yokuhombisa kunye neglu icinyiwe.
Inyathelo 5: Phinda kwakhona kwelinye icala leemivimbo.
Guqula iinkophe zobuxoki ngaphezulu. Fumana i-swab entsha yomqhaphu kwaye uyithambise kwisithambisi sokwenza makeup okanye kwiFelvik False Eyelash Remover. Emva koko, phinda inkqubo yokuhambisa i-swab kwelinye icala leenkophe. Kwakhona, suka phezulu kwinqwelo uye kwincam. Qiniseka ukuba uswayipha iswabi ecaleni kwebhendi yokuncamathela. Qiniseka ukuba yonke into yokuthambisa isusiwe.
Inyathelo 6: Sebenzisa i-tweezers ukususa nayiphi na iglu.
Ngokuqhelekileyo kuya kubakho i-glue enamathele kwi-band band. Ungasebenzisa i-tweezers ukuyisusa.
Hlola ukuqhuma nayiphi na iglue esele kuyo. Ukuba ufumana iglu, thatha ii-tweezers zakho. Ngesandla esinye, susa iglue kunye ne-tweezers. Ngesinye isandla, bamba i-eyelashes kunye neepads zeminwe yakho.
Qiniseka ukuba utsala kuphela kunye nezincedisi. Ukutsala imivimbo kungonakalisa ii-eyelashes ezingezizo.
Inyathelo 7: Dipha isawuni yomqhaphu esitsha ngokurabha utywala kwaye usule umgca wokuqhekeka.
Ufuna ukuqinisekisa ukuba ufumana nayiphi na i-glue eseleyo okanye i-makeup ngaphandle komtya. Dipha i-swab yakho yomqhaphu ngokurabha utywala kwaye uyisule ecaleni komtya. Ukongeza ekususeni iglu, oku kuyabulala intsholongwane ukuze uphinde usebenzise iinkophe ngokukhuselekileyo kamva.
Indawo yaseChengdu ePhakamileyo yeTekhnoloji, China (Sichuan) uMmandla woRhwebo oSimahla waseChengdu, eChengdu, kwiPhondo laseSichuan, 610051, China
IINGCEBISO ZESHUMI KUFUNEKA WAZI UKUBA ...
Coca ii-eyelashes zobuxoki ngokusebenzisa iPlastiki ...